जसलाई अफ्नो मिर्गौला दिइन उसैसंग बिहे गरिन रविना बादिले ….(भिडियो सहित) – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /Video/जसलाई अफ्नो मिर्गौला दिइन उसैसंग बिहे गरिन रविना बादिले ….(भिडियो सहित)
जसलाई अफ्नो मिर्गौला दिइन उसैसंग बिहे गरिन रविना बादिले ….(भिडियो सहित)
सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भएकी रविना वादीले तेस्रो विवाह गरेकी छन् । उनले आफ्ना प्रेमी आरुष चौहानसंग विवाह गरेकी हुन् । उनीहरुको विवाह भएको भिडियो वाहिरीएको छ । पछिल्लो समय आरुषसंग निकै रोमाञ्टिक मोडमा देखिने गरेकी रविनाले अन्तत सुटुक्क विवाह गरेको खुलेको हो । केही दिन अघि उनले आफुलाई आरुषले धोका दिएको भन्दै लाइभ भिडियो मार्फत निकै विलौना गरेकी थिइन् ।
तर अहिले उनी खुसी छन् । उनको प्रेमी पनि नेपाल आएका छन् । नेपालकै एक मन्दिरमा उनीहरुले विवाह गरेको खुलेको छ । सार्वजनिक भएको भिडियामा हिन्दु परम्परा अनुसार विवाह भएको देखिएको छ । विवाह पछि संक्षिप्त प्रतिकृया दिँदै उनीहरुले अब आफुहरुले एउटा सन्तान चाहेको र त्यो छोरी होस भन्ने चाहेको बताएका छन् । उनको आफ्नो दुखदायी जीवनका घटना र आफ्नो सानो छोराका कारण उनी धेरै चर्चामा आएकी थिइन् । सानै उमेरमा यौ न हि ँसामा परेको र दोस्रो विवाह पछि पनि उनलाई श्रीमानले धोका दिएको भन्दै उनी एउटा युट्युव च्यानल मार्फत सार्वजनिक भएकी थिइन् ।
ब्लड क्यान्सरको रोगी भएको आफ्नो एक वर्ष उमेर नपुगेको छोरालाई बचाउन उनले आफ्नो एउटा मृगौला समेत बेचेको बताएकी छन् । उनी आरुष जसलाई उनले मृगौला बेचेकी थिइन् उनैले रविनालाई जिवनभरको लागि साथ दिएका छन् । आरुषले नै छोराको उपचार आफुले गरिदिने सर्तमा रविनाले उनलाई आफ्नो एउटा मृगौला दिएकी हुन् । भारतमा गएर रविनाले आरुषलाई मृगौला दिएको भन्दै समाचार वाहिरिएको थियो । विवाह भए पछि रविना निकै खुसी देखिएकी छन् ।
आफ्नो ४६ वर्ष पुरानो घडी बेच्न गएका ब्यक्ति त्यसको मुल्य सुनेर भुइँमा लडे (भिडियो)
ऋचा शर्माले भनिन्, मलाई अतिथि बोलाउने अधिकार हुन्थ्यो भने ऋषि र एलिजालाइ बोलाउने थिइन (भिडियो)